Hadoop Fitantanana - Torolalana iray manontolo - ITS Tech School
Torolalana iray feno ho an'ny administration Hadoop
Fampahafantarana an'i Hadoop
Fiantohana ny fampiofanana Hadoop
Hadoop Fanamarinana ny fanamarinana
Raha tsy mihoatra ny 5 taona, Hadoop irery no handrindra ny ankamaroan'ny angon-drakitra erantany. Ny teknolojia vaovao dia mafana, ary ny orinasa dia tena ilaina tokoa ny kandidà manana ny mari-pankasitrahana Hadoop.
Ny rafitra fandaharana Java rafitra Hadoop dia loharanom-baovao tsotra ary natao hikarakarana ireo tahirin-databatra lehibe sy lehibe izay hita ao anatin'ny fepetra PC. Araka ny nampiasan'i Hadoop ireo lohamilina maotina mba hanomanana ny angon-drakitra, ireo orinasa sy orinasa tahaka sy miankina amin'ny modely amin'ny vidim-piainana. Ny tombontsoa samihafa amin'ny rafitry ny programa dia mampifandray ny famolavolana ny karazan-tsinjara samihafa azo ampitaina, ny fitomboana, ny fanatsarana ny toerana misy ny tahirin-kevitra, ny fanohanana ny lantom-pitobiana lehibe, ary ny fitantanana ny fahombiazana amin'ny fomba maody.
Ny ampahany lehibe amin'ny 2 ao amin'ny raharaham-pitantanana Hadoop dia mampiditra MapReduce sy HDFS. Hadoop dia mizara ampahany kely amin'ny angon-drakitra na angon-drakitra ny tahirin-tserasera tsirairay ary arotsaka ao anatin'io sehatra samihafa io ny fonosana data, ny atody ao amin'ny vondrona. Hadoop dia tena mahomby tsara ary ny vanim-potoana handrafetana ny angon-drakitra na vitsy kely ho fahatsiarovana ny faribolana dia tena kely. Hadoop koa dia mamerina mamoaka ny angon-drakitra rehetra amin'ny milina samihafa izay hita ao anatin'ny vondrona ary ny dika mitovy vita dia mivelatra mivantana amin'ny valin'ny fangalarana. Koa satria ny duplicate isan-karazany dia azo amidy mora foana amin'ny fotoana iray ihany, dia mihena ny fotoana fanodinana daty.
Ny fanamarinana Hadoop dia mampiseho fa afaka mampiasa ny rafitra fitantanana ny angona ianao amin'ny fampitomboana ny vokatra vokarin'ny orinasa iray. Ny orinasa dia mitady fikarohana tsy tapaka ireo tompom-pahazoan-dàlana Hadoop, izay mampiseho ny fahamendrehana sy ny fahaiza-manaonao izay mety tsara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny asa mifandraika amin'ny fitantanana Big Data.
Nahoana ianao no hanao fanamarinana an'i Hadoop ho an'ny asanao?
Hadoop no fomba vaovao handaminana antontan-kevitra lehibe, ary ny Hadoop antoka ny matihanina dia takiana amin'ny fiantohana, ny fitsaboana, ny vola, ny varotra, ny zava-manahirana ary ny sehatra ara-barotra maro samihafa sy ny sehatra. Tena nahomby ny fanatanterahana ny Hadoop ary maro ireo manam-pahaizana IT no nanova ny lalan'ny asa mba ahafahana mametraka ny teknolojia vaovao. Hadoop dia ankatoavina ao amin'ny Mainframe, Java, ary Data warehouses amin'izao fotoana izao ary amin'ny ho avy ho avy, ny rafitra vaovao no fanapahan-kevitra lehibe indrindra amin'ny fandalinana sy ny fanomanana ny angona.
Ny fampiofanana sy ny fanamarinana an'i Hadoop dia manana tombontsoa samihafa ho an'ny matihanina IT sy ny freshers.
Ny fangatahana dia mangataka ary ny orinasa dia mikaroka fatratra ireo kandidà manana ny mari-pankasitrahana sy fahaiza-manaon'ny Hadoop.
Ny fanamarinana Hadoop dia manolotra anao ny karama sy ny toerana hiakarana, ary afaka mahazo vola mihoatra noho ny hafa ianao rehefa avy nandany ny lalana.
Ireo vaovao ao amin'ny rafitra Hadoop sy ny toe-javatra dia afaka mandalo ny fanamarinana ary mahazo izay azony sy ny fampahafantarana amin'ny fananganana ny rafitra sy ny fampiharana azy.
Satria ny fotoana dia ny fampiofanana ary mamporisika anao hiatrika ny toe-javatra sy ny zava-misy marina eran-tany, ny fanamarinana dia maneho fa ny fandraisanao tànana ny fandraisana anjara amin'ny toerana tadiavina.
Ampahafantaro fa mahafantatra ny lafiny rehetra amin'ny teknolojia farany ianao ary afaka manampy amin'ny fampiofanana olon-kafa rehefa ampiasain'ny orinasa iray.
Torolalana amin'ny antsipiriany mba hiomanana amin'ny fanamarinana Hadoop
Ny fanamarinana ny Hadoop dia ahitana manodidina ny ora 30 amin'ny aterineto sy ny fanofanana miaina izay nokarakarain'ireo mpampianatra nahazo alalana, nahazo alalana sy nahazo alalana. Mety ho azonao atao ny mampifanaraka ny fotoana ahafahanao mianatra ny fianarana. Tsy maintsy handray andraikitra ihany koa ianao, ary ny raharaha tena izy dia mifantoka amin'ny fanampiana azonao an-tanana ny fandraisana anjaran'izao tontolo izao. Vitsy dia vitsy no ilaina amin'ny fianarana ny fianarana, satria ny mpamatsy mandeha amin'ny aterineto dia hanome anao ny 24 * 7 hita eo an-tserasera an-tserasera izay tonga mivantana avy amin'ireo manam-pahaizana manokana. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny fifanakalozan-kevitra izay ahafahanao mifaly amin'ny fitantanana fifampizarana mifampizara ary mizara ny fahalalanao rehefa mahazo ny fihaonan'ny hafa. Ankoatra ireo tombontsoa sy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fianarana, dia afaka miditra amin'ny rafi-pampianarana momba ny fianarana ihany koa ianao, izay manatsara hatrany ny fahaizanao sy ny fahaiza-manaonao ary mahatonga anao hifanaraka amin'ireo fanavaozana farany sy fanovana mifandraika amin'ny Hadoop.
Ireo foto-kevitra sy foto-kevitra lehibe notazonin'ny fanamarinana Hadoop dia ahitana:
Hadoop sy Big Data architecture
HBase sy Hive
Hadoop sy Oozie manitatra
Fanitsiana sy fampielezana ny angon-drakitra amin'ny fampiasana ny Apache Spark
Ny fototra fanabeazana an-tserasera dia hanangana ny milina virtoaly ao anatin'ny rafitra PC ary hametraka anao amin'ny fidirana an-toerana. Ny LMS na ny Systems Management Learning dia hanana ny torolàlana maimaim-poana sy fametrahana fampitaovana izay tokony hiainanao ny fianarana. Ny fanadihadiana momba ny toe-javatra dia ho tonga eo am-piafarànao ny fianarana ary hampiasa ny rafitra fasiana ariary toy ny HIVE, PIG, MapReduce ary HBase ianao amin'ny fanatanterahana ny antontan'isa amin'ny Big Data amin'ny fotoana tena izy. Ireo tranga ireo dia indostrian'ny indostria ary mifandraika amin'ny sehatry ny orinasa, anisan'izany ny media, ny fiaramanidina, ny varotra, ny vola ary ny hafa.
Rehefa tapahana ao amin'ny LMS avokoa ny fampianarana sy ny fanofanana rehetra dia tsy hahatsapa ny fahaverezan'ny kilasy iray ianao ary afaka mahatsapa azy ireo amin'ny fotoana rehetra irinao. Ankoatra ny LMS, ireo fotoam-pivoriana mivantana dia mamerina indray ireo kilasy indray ho an'ny anton-javatra miavaka ary azonao atao ny mianatra ireo lohahevitra tsy azonao tamin'ny adiresy manaraka na ny fotoam-pianarana.
Inona ireo fepetra takiana amin'ny fanamarinana Hadoop?
Na dia tsy misy fepetra takiana amin'ny fisafidianana ny fanamarinana Hadoop aza, dia tsara kokoa ny manampahefana misimisy momba ny SL sy ny Core Java. Azonao atao ny mianatra ny fahaiza-manaon'ny Java na azonao ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny dingana hafa.
Mila PC ianao, fara fahakeliny 4 GB RAM, miaraka amin'ny processeur i3 (na mihoatra lavitra) mba hiditra amin'ny fianarana an-tserasera ary hianatra izany amin'ny fomba mahomby. Raha toa ka tsy mahavita manatratra ny filàna ilaina ianao, dia azonao atao koa ny mahazo fidirana an-tserasera amin'ny vondrona Hadoop amin'ny alàlan'ny fanamarinana mari-pamantarana anao.
Nahoana no tsy maintsy miofana amin'ny asa ataonao i Hadoop?
Ny orinasa tsara indrindra amin'ny orinasa manerantany, anisan'izany ny MNC dia mila mpiasa matihanina, izay afaka mitantana ny angona be dia be izay tsy maintsy ampiasainy na hitahirizany. Ny haben'ny angon-drakitra dia mety ho mahery vaika tokoa ka handraisany ny vaovao marina sy marina avy amin'izany dia mety ho asa mahasalama. Ireo olona izay mandalo ny fanamarinana Hadoop dia mety hahatratra ny tanjona mora ihany. Satria ny rafitra Hadoop dia mahazo ny fahafahana mihamitombo sy manan-danja kokoa isan-kerinandro sy isam-bolana, ny fanamarinana ao anatin'ity faritra ity dia afaka mampita fahombiazana betsaka ao anatin'io sehatra io.
Ny ivon-toeram-pampianarana Hadoop manodidina ny fanomezana anao rehetra ny Big Data manomana fahaiza-manao ary mikasa ny hametraka anao ho dokotera Big Data antoka. Ny fampiofanana avy amin'ny tanana dia mifandray amin'ny fomba fiasa sy ny tontolo manodidina an'i MapReduce, HDFS, HBase, Pig, Hive, Sqoop, Oozie ary fananganana antontan-kevitra hafa. Ny fianarana Hadoop dia manome anao ny fahaiza-manao ilaina sy ny fianarana amin'ny sehatra toy ny:
Fahatakarana ny rafitra Hadoop 2x
Fametrahana ny vondrona Hadoop sy ny fametrahana ny sainan'ny sainam-pirenena
Manomboka amin'ny fanadihadiana momba ny angon-drakitra amin'ny fampiasana Hive, Pig, ary YARN eo anivon'ireo rafitra sy modely samihafa
Fanamafisana ny map Fampihenana sy fampiharana ny H Base
Fandaminana ny asa any Oozie
Miasa amin'ny fahatakaran'ny RDD momba ny Spark sy ny rafitra biolojika manontolo
Ny famoahana ny tifitra amin'ny tena fiainana dia manitatra sy manadihady ny analytics mifandraika amin'ny angona goavana.
Ny fikarohana farany dia mampiseho ihany koa fa ny maha-zava-dehibe an'i Hadoop ho rafitra fanaraha-maso Big Data dia ny hitombo tsy ho ela. Ny tatitra milaza fa ny tsenan'i Hadoop dia tokony ho $ 99.31 miliara alohan'ny taona 2022, ary hivoatra amin'ny manodidina ny 42.1 amin'ny hoavy.
Mianatra rakitra goavambe ary Hadoop dia mamokatra ho an'ny mpiompy sy ny manam-pahaizana IT. Ny injeniera, ny architects, ny fizahan-toetra, ny BI, ny DDW, ary ny ETL dia afaka mianatra manitatra ny fahaiza-manaony ary mampiasa azy ireo amin'ny fitantanana angon-drakitra.
Ny tompon'ny foibem-pampianarana Hadoop an-tserasera dia handinika ny fandraisanao farany, ary amin'ny fotoana tsy ahafahanao mandalo ny mari-pahaizana, dia homena ny mari-pankasitrahana Big Data sy Hadoop ianao. Ny fankatoavana dia mankasitraka ny fandeferana sy ny fanekena. Maro ireo orinasa lehibe sy MNC no mpiara-miasa fampiofanana momba ny fiofanana sy ny fanofanana amin'ny aterineto malaza, ary ahitana Wipro, Nokia, Cisco, Ford, IBM ary ny toy izany. Afaka mahazo antoka avy eo ianao fa azo antoka ny fanamarinana anao ary hanome anao ny fiantsoana ny laza sy ny karama ambony.
Ny fanamarinana Hadoop dia hahatonga anao hahafeno ny karama amin'ny $ 98 k na tsikelikely sy miaraka amin'ny traikefa, mitombo bebe kokoa ny karama. Misy mihoatra noho ny 4.4 tapitrisa asa goavana ho anao amin'izao fotoana izao, ary ny varavarana misokatra dia mitombo amin'ny tahan'ny 12%. Ireo mpanakanto Hadoop no tsara indrindra sy tena tadiavina taorian'ny nananganana ny angon-drakitra androany, ary afaka miditra amin'ny seranam-piaramanidina ianao amin'izao fotoana izao mba hanadihadiana skylines vaovao.